လားရာဂတိ	Posted on May 13, 2010	by mettayate “အရှင်ဘုရား … လူတစ်ဦးသေဆုံး၍ တမလွန်ဘ၀ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် အကြားအမြင်ဆရာ၊ ဘိုးတော်၊ နတ်ဝင်သည် စသည်တို့က သေဆုံးသူသည် မည်သည့်ဘုံဘ၀သို့ရောက်ရှိနေကြောင်း သွားရောက်မေးမြန်းသူ မိသားစုတို့အား ပြောဆိုဟောပြောနေကြပါသည်။ တပည့်တော်သိလိုသည်မှာ ထိုလူများသည် အမှန်တကယ်သိ၍ပြောနိုင်ခြင်း ဟုတ် မဟုတ်။ ထိုသို့ဟောပြောလိုက်၍ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက် စိတ်ချမ်းသာမှုနှင့် စိတ်ဆင်းရဲမှု မည်သည်က ပို မပို သိရှိလိုပါသည် ဘုရား…။”
This entry was posted in ကောက်နှုတ်မှုများ. Bookmark the permalink.	← တစ်ရာ နှင့် တစ်ရက်